"Oromoon addunyaaf kan gumaatuufi kan irraa fudhatus hedduu qaba," Dr. Mulugeetaa Dabbabaa - BBC News Afaan Oromoo
"Oromoon addunyaaf kan gumaatuufi kan irraa fudhatus hedduu qaba," Dr. Mulugeetaa Dabbabaa
Goodayyaa suuraa Dr.Mulugeetaa Dabbaba Gammachuu
"Afaan Oromoo bal'inaan Afirikaa keessatti kan haasa'amu waan ta'eef BBC'n maaliif afaan kanaan tajaajila hin jalqabuu jedheen xiiqiin xalayaa BBC'f barreeesse," Dr. Mulugeetaa Dabbabbaa Gammachuu.
Dr. Mulugeetaa Dabbabaa yeroo ammaa gaggeessaa Dhaabbata 'Oromo Self Help (OSHO' ta'anii hojjetu. Waldaa Misooma Oromiyaa fi dhaabbileen miti-mootummaa gara garaa keessa hojjechuun muuxannoo dheeraa qabu.
Quuqama uummanni Oromoo filannoo odeeffannoo gara garaa argachuun irraa barachuuf qaba jedhuun BBC'n akka afaan Oromootiin tajaajila jalqabuuf waggoota 23 dura xalayaan gaafataanii turan.
Hawwiin isaanii bara sanaa dhuguumee BBC Afaan Oromoo jalqabeera. Xalayaan bara sana BBC'n gaaffii isaanii xalayaan deebiiseef hanga har'aallee of harkaa qabu.
Image copyright Dr. Mulugeetaa Dabbabaa
Goodayyaa suuraa Xalayaa deebii A L A bara 1995 BBC'n Dr. Mulugeetaaf barreesse
Afaan Oromoo afaan miidiyaa akka ta'uuf dhuunfaan ta'e akka gareetti Oromoonni yaalii gachaa turan hedduudha. Isaan keessa Dr. Mulugeetaa Dabbabaa Gammachuu tokkodha. Dr. Mulugeetaan BBC'n tamsaasa Afaan Oromootiin akka jalqabuuf waggoota 23 dura BBC gaafatanii turan. Xalayaan BBC'n A L A bara 1995 deebii gaaffii isaanitiif barreesseef hanga har'aatti harka qabu.
Maaltu xalayaa sana barreessan akka isaan kakaasees Dr. Mulugeetaan akkasiin himu. Bara sana dhaabbata miti-mootummaa 'Care International' jedhamu waliin Harargee Ciroo hojetaa turan. Yeroo sanatti BBC'n tamsaasa Afaan Somaaleetiin waan dabarsuuf warri Somaalee ni dhaggeeffatu.
Dhaggeeffatanis odeeffannoo argachuun yaada waljijjiiraa turan jedhu. Akka isaan jedhanitti, gama uummata Oromootiin garuu carraan kana hin qaban. Kan jirus madduma tokko; raadiyoo Itoophiyaa qofaan kan darbu waan tureef carraan odeeffannoo haala naannoo, biyyiifi addunyaan itti jirtu argachuu danda'an hin turre.
Kanaaf, uummata Oromoo bal'aa biyyoota Keeniyaa, Itoophiyaafi Somaalee keessa jiru kanaaf maddi odeeffannoo addunyaa ittiin argatu qabaatu ni barbaachisa jedhu. "Afaan Oromoo Afirikaa keessatti bal'inaan dubbatamaa waan ta'eef maaliif BBC'n Afaan Oromootiin hin jalqabu jechuun xiiqiin ka'een ALA bara 1995tti xalayaa barreessuun gaafadhe. Xalayaa deebii BBC'n naaf deebiisan keessattis bara sanaaf baajata akka hin qabneefi bakka dursi itti kenname biraa irratti xiyyeeffanna jedhan."
Waggaa 23 booda nama hawwiin dhugoomteef
Sirna Gadaarraa addunyaan kan baratu qaba
Dr. Mulugeetaan BBC'n Afaan Oromootiin tajaajila yoo jalqabe, afaan barsiisuu, seenaafi aadaa Oromoo addunyaaf beeksisuun ni danda'ama jedhu. Oromoon aadaafi dudhaa bareedaa addunyaaf gumaachu hedduu qaba. Fakkeenyaaf, Sirna Gadaa Oromoo addunyaan kan baratu qaba. "Oromoon waan addunyaaf ta'u hedduu qaba. Akkasumas waan addunyaa irraa fudhatus ni qaba waan ta'eef kanan isaanitti himaa ture," jedhu Dr. Mulugeetaan.
Dhuunfaattis BBC dhaggeeffachuu kan jalqabe wayita kutaa 12 baratan akka ture tureefi faayidaa miidiyaan karaa hedduutiin milkaa'ina hawaasaatiif gumaachu dubbatu. "Miidiyaa jechuun karaa ittiin odeeffannoo argatanidha. Odeeffaannoo argatu malee uummanni tokko of beekuu ta'e, addunyaa beekuu hin danda'u. Kanaaf, miidiyaan murteessaadha. Uummanni misoomaaf kan kaka'u miidiyaa dhaga'eeti," jedhu Dr. Mulugeetaan.
"BBC nan dinqisiifadha..."
Xalayaa BBC yeroo sanatti isaaniif barreesse kan abdii isaan kutachiisu hin turre. Gaaffii isaan gaafatan hubachuun galateeffatanii yeroo sanatti dursi kan kenname bakka biraa akka ta'e ibsaniif. "Ani BBC baayyeen dinqisiifadha. Maaliif ani nama tokkoo akka biyyaa ykn akka dhaabbaatti miti kanan gaafadhe. Bakka itti kennanii gaaffiikoo kana bilbilaanillee na gaafatanii dhumarratti xalayaa naaf barreessan. Kanaaf, baayyeen isaan dinqisiifadhe," jedhan.
"Uummanni kee waa akka beeku barbaadda. Garuu waa dhaga'u fi argu male uummanni tokko odeeffannoo argatee gara guddinaatti deemuu hin danda'u," Dr. Mulugeetaa
Tajaajilli BBC Afaan Oromootiin yoom dhugaa ta'a jedheen irra deddeebiyeen poostaan ergaa ture yeroo sana. Kanaaf, yeroo ammaa kana BBC Afaan Oromoon tajaajila isaa jalqabuusaa yoon argu baayyeen gammade, jedhan. "Namni tokko waan yaadeefi hawwe tokko argachuuf carraa argate maratti fayyadamu qaba."
Miidiyaan karaa namni mana taa'ee ittiin baratuudha kan jedhan Dr. Mulugeetaan, hawaasa tokkoof filannoon jiraachuun ammoo odeeffannoo haala naannoofi addunyaa argachuurra darbee carraa barachuu bal'aa saaqaaf jedhan.